अनुप्रयोगहरू (सिडिया) बन्द गर्दा गेस्चरप्लसले एनिमेशनहरू सुधार गर्दछ आईफोन समाचार
अनुप्रयोगहरू (साइडिया) बन्द गर्दा गेस्चरप्लसले एनिमेसन सुधार गर्दछ।
आईओएस .7.1.१ ले अन्य सुधारहरूको अतिरिक्त धेरै कस्मेटिक परिवर्तनहरू ल्याएको छ। फोन अनुप्रयोगको बटनहरू, क्यालेन्डरको नयाँ रूप वा उपकरणको नयाँ अफ बटनहरू सायद सबैभन्दा स्पष्ट परिवर्तनहरू हुनसक्छन्, तर त्यहाँ अरू पनि छन् जसले सायद कम ध्यान आकर्शित गरेका छन् तर उल्लेखनीय पनि छन्। ती मध्ये एक एनिमेसनको सुधार हो जुन "बन्द गर्न बन्द हुने बेला" हुँदा हुन्छ, एउटा इशारा जुन केवल आईप्याडमा देखा पर्दछ, किनकि आईफोनले यसलाई अनुमति दिदैन, तर आक्सो जस्ता ट्वीक्सको लागि धन्यवाद हामी एप्पल स्मार्टफोनमा पनि देख्न सक्छौं। । गेस्चर्सप्लस Cydia बाट एक नयाँ चिमटा छ कि पुरानो आईओएस versions संस्करणहरूमा नयाँ आईओएस .7.1.१ एनिमेसन लेराउँदछ। निम्न भिडियोमा म के कुरा गरिरहेको छुँ भनेर सबै भन्दा राम्रो हुन्छ किनकि शब्दहरूमा व्याख्या गर्न सजिलो छैन।
मैले इमानदारीसाथ स्वीकार गर्नुपर्दछ कि अहिले सम्म मैले एनिमेसनलाई विचार गरेन जब एक विफलताका रूपमा इशाराको साथ अनुप्रयोग बन्द गर्दा। मैले भर्खर सोचेँ कि एनिमेसन त्यस्तै थियो, यद्यपि यो आईओएस works.१ मा कसरी काम गर्दछ देखेर पनि मैले स्वीकार्नु पर्छ कि सबै कुरा पहिले भन्दा बढी सामंजस्यपूर्ण देखिन्छ। गेस्चरप्लस अब सिडियामा उपलब्ध छ, BigBoss रेपोमा नि: शुल्क, र दुबै आईप्याड र आईफोनमा स्थापना गर्न सकिन्छ। आईफोनमा यो एनिमेसन हेर्न सक्षम हुनको लागि, तपाईंले एउटा साइडिया अनुप्रयोग स्थापना गर्नुपर्नेछ जसले तपाईंलाई इशाराहरू मार्फत अनुप्रयोगहरू बन्द गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, जस्तै Auxo २। यदि तपाईंसँग आईप्याड छ भने, तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको putting वा इशारा गर्ने पोशाक हो। Fingers औंलाहरू सँगै कि अनुप्रयोग बन्द हुन्छ र तपाईं एनिमेसन यो आईओएस .2.१ मा हुन्छ रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। गेस्चरप्लससँग कुनै कन्फिगरेसन उपलब्ध छैन, र एक पटक स्थापना गरिसकेपछि यो पहिले नै सक्रिय गरिएको छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विवरण यो एनिमेसन हो मात्र तपाईंसँग डिफल्ट आईओएस सेटिंग्स छ भने मात्र हुन्छ, किनभने यदि तपाईंले "पहुँच" मेनू भित्र एनिमेसनहरू परिमार्जन गर्नुभयो, आन्दोलन घटाउन विकल्प सक्रिय गर्दै, तपाईंले कुनै पनि एनिमेसन देख्नुहुनेछैन, न त "दोषपूर्ण" न आईओएस .7.1.१ को "सहि" देख्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » जेल » Cydia » अनुप्रयोगहरू (साइडिया) बन्द गर्दा गेस्चरप्लसले एनिमेसन सुधार गर्दछ।
यसलाई रेकर्ड गर्न, तपाई इमुलेटर प्रयोग गर्नुहुन्छ, हैन? तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ यो के हो?
खैर ... मैले मूल एनिमेसनको साथ कुनै समस्या देखिनँ, यो सत्य छ कि नयाँ सफा देखिन्छ किनकि यो डेस्कटपमा गरिन्छ र त्यसपछि अनुप्रयोगहरू देखा पर्दछ, तर मलाई पनि मूल मनपर्दछ।
चालमा जवाफ दिनुहोस्
हामी अर्को आईओएस What बाट के आशा गर्छौं?
डिस्टर्बप्लीज: चिमटा कि आईओएस ((Cydia) को बाधा नगर्नुहोस् मोडमा अधिक प्रकार्यहरू थप गर्दछ।